Kilalao iombonana: nahay tsy sazoka ny zaza Malagasy | NewsMada
Kilalao iombonana: nahay tsy sazoka ny zaza Malagasy
Nohalavirina tahaka ny fasam-bao ny fanorona, ny katro, sns. Somary lava anefa ilay 15 andro tsy andehanana any an-tsekoly. Izay leo na savolain’ny filalaovana “jeux” isan- karazany (saika lalaon’olon-tokana ny ankamaroany), sady voasarika moramora any amin’ny fitadiavana kilalao hafa no te hiaraka hilalao amin’ny hafa ihany koa. Satria na i dada na i neny, samy tsy mahay na mahafehy loatra ny kilalao Malagasy, ampiasaina ny teknolojiam-pifandraisana samihafa hamantarana ireo lalao Malagasy toy ny fanorona sy ny katro, sns. Rafitra mianatra azy ireny amin’izay avy eo.
Nanjary “nahay” tsy sazoka ny kilalao iombonana nam­piavaka ny Malagasy ny zaza sy ny tanora ary ny olon-dehibe sasany. Hatreo ihany anefa fa mbola tsy misongadina loatra ilay fahalianana amin’ireny kilalao malagasy ireny. Mbola ampahany vitsy ihany ireo milaza fa handalina. Ny anka­maroany milaza fa “tsy afak’andro ka aleo manova kilalao tahaka izao indray”!
Raha mbola tsy sazoka tahaka izany anefa ny handraisana ny kilalao (kilalao = fialamboly miampy fitaizana sy fana­beazana, teo amin’ny Malagasy), tsy azo antoka ny hiverenan’ny fitiavana sy ny fahalalana ilay fototra maha Malagasy ny Malagasy.